Shenzhen MINGXUE Optoelectronics Co., Ltd (eyaziwa ngokuba MINGXUE, kwemfuyo Ikhowudi: 838130) yasekwa ngowe-2005, MINGXUE i umenzi ukwenza uphando, uphuhliso, imveliso nentengiso ka-LED khula ukukhanya, wakhokela umcu, wakhokela bar kwaye LED ukubonisa module zizityalo ngaphezu 13.000 zemveliso kweemitha square.
Mingxue ine ngamava iminyaka engaphezu kwama-13 kwakhokelela, abasebenzi abanezakhono, Equipments oluphambili kunye nolawulo strick kunye nenkqubo evelisa sibe enye inkampani phambili kushishino kwakhokelela.
MINGXUE iye ngokulandelana wafumana namashishini-level karhulumente ophezulu-zobugcisa, top iinkampani 100 LED, kunye nezinye ngeziqu, kwaye ziqinisekiswe SGS / ISO9001: 2000 / TS16949 CE RoHS, FCC, ERP, ul LM-80 kwakunye ul 8800 ukuze kwenza kukhule izibane.
kwakhokelela MINGXUE bakhule izibane ezisetyenziswa kakhulu mveliso yezityalo, greenhouse, ukukhula iintente etc; kunye iziqwengana LED MINGXUE kaThixo ezisetyenziswa ngemixokelelwane evenkileni, iiprojekthi ehotele, iminquba kwithala, amakhaya smart kunye etc; MINGXUE kaThixo umnqongo isiboniso ngokubanzi lisetyenziswa eendaba enkulu, izicelo phandle izibhengezo zangaphakathi kunye nezinye iinkalo.
Ukuze uphendule elibonakalayo necebo likazwelonke enkulu yokuphuhlisa amashishini ophezulu zobugcisa, kunye nokufumana imali ethe kratya uphando. Ngoko sinako ukuvelisa iimveliso kakuhle LED, ukwenza iimveliso zethu olunokhuphiswano apha ekhaya nakumazwe aphesheya, Le nkampani kuluhlu ngempumelelo kwi Beijing neeq ngo-2015.
MINGXUE ithemba ukuseka intsebenziswano ixesha elide nawe iimveliso zethu umgangatho ophezulu Inkonzo yethu ngokunyanisekileyo!